Curtains azo ampiasaina amin'ny hopitaly, ambainy azo atsimo - Tianfeng
Suzhou Tianfeng tontolo iainana fitaovana, natsangana tamin'ny 2008, dia orinasa feno
ambainy avo lenta azo ampiasaina amin'ny hopitaly miaraka amin'ny fahaizana manao fikarohana sy fampandrosoana, famolavolana sy famokarana.
Ny vokatray dia misy ambainy mahazatra azo ampiasaina, ambain harato ary ambainy vita pirinty.
Ambainy mahazatra azo ampiasaina
ny lambam-baravarana dia vita amin'ny polypropylene 100% izay misy ny fiantraikan'ny tontolo iainana ambany indrindra - synthetic na converttional.
Ambain-jaza azo ariana
Ny ambaintsika manary lamba dia manatsara ny fomba fitantanan'ny hopitaly ny fomba fidiovany sy ny fisehoany.
Ambain harato azo ariana
Vatokely azo ariana
Suzhou Tianfeng tontolo iainana Teknolojika momba ny tontolo iainana, natsangana tamin'ny taona 2008, dia orinasa iray manokana manamboatra ambainy avo lenta amin'ny hopitaly manana alàlan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana ary ny famokarana. Izy rehetra miaraka amina farango sy marika misy hafanana.
Ny lambam-panafody misy antsika vaovao dia natao hanoloana ireo ambainy efa azo ampiasaina sy azo hosasana ankehitriny, miaraka amin'ny tahiry lafo sy fanatsarana ny fifehezana ny aretina.
Izahay dia manam-pahaizana manokana momba ny fanaraha-maso ny aretina azo tsapain-tanana, fanamboarana lambam-panadinana azo ampiasaina amin'ny hopitaly miady amin'ny bakteria sy maharitra afo.
13+ taona niainana tamin'ny fanamboarana ambainy cubicle azo ampiasaina
Voaporofo fa mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fanoherana ny bakteria sy ny lelafo
Mitahiry vola be ary manatsara ny fanaraha-maso ny aretina
Tsipika famokarana tsy miankina amin'ny bakteria
Vita amin'ny lamba tsy voatenona polypropylene 100%
Hatramin'izao dia tsy maintsy noporofoin'ireo mpiasa fa voan'ny aretina ilay asa. Fa fanjakana 16 izao no mihevitra ny hametraka ny onjam-pitsaboana amin'ny hopitaly: asio porofo fa tsy nahazo ilay aretina ilay mpiasa. Iray amin'ireo singa maro mahatonga an'io aretina coronavirus 2019 (COVID-19) ...
Ny Agency Environmental Protection Agency (EPA) dia nanaiky ny Lysol Disinfectant Spray hiadiana amin'ny SARS-CoV-2, ilay virus izay miteraka aretina coronavirus 2019 (COVID-19). Nanaiky ny Lysol Disinfectant Spray ny maso ivoho miaro ny tontolo iainana (EPA) hiady amin'ny SARS-CoV-2, ilay virus miteraka coronavirus ...
Ireo trano fitaizan-jaza mahay dia mijanona ho marefo hatrany amin'ny COVID-19
Ilaina mafy ny mampiditra SNF miaraka amin'ny loharanom-pahalalana bebe kokoa, tsy amin'ny resaka fitaovam-piarovana manokana ihany, fa koa amin'ny loharanom-pahalalana sy mpiasa miasa amin'ny fisorohana aretina. Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra SARS-CoV-2 / COVID-19 tany Etazonia, dia fantatray betsaka ny marefo ...